Using Fcrackzip on Backtrack5| Shwekoyantaw
Published : 6:14 AM Author : shwekoyantaw
အခု ကျွန်တော် Backtrack မှာပါတဲ့ tool တစ်ခု အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ tool တစ်ခုပေါ့ အဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်ပါတယ် Fcrackzip ပါ သူက နာမည်အတိုင်းပဲ zip ဖိုင် password တွေကို ဖြည်တဲ့ tool လေးတစ်ခုပါ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်
အခု wine အောက်က rar ကနေ အစောကဖိုင်အသစ်ဆောက်ထားတာလေးကို zip လုပ်ပါမယ်……………. .
rar ကနေတစ်ဆင့် ခဏက txt ဖိုင်လေးကို zip လုပ်ပါမယ် ပုံမှာပြထားပါတယ်
နောက် Advance ကိုရွေးပြီ password ကို ကိုယ်ကြိုက်တာထည့်လိုက်ပါ စမ်းမှာဆိုတော့ ၁-၆လုံးကြားထည့်ရင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်…………..:P ပုံမှာပြထားပါတယ်……ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ pass ပေးပြီးရင် ok လိုက်ပါ သုံးရတာလွယ်အောင် Desktop ပေါ်မှာပဲထားပါနော်……….
နောက် fcrackzip ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပါမယ် သူက Application>Backtrack>Privilege Escalation>Password Attack>Offline Attack>Fcarckzip ပါ နောက် သူက Forensics tool ထဲမှာလည်းပါပါတယ် အဲစလိုက်ကြရအောင်……..ပုံမှာကြည့်ပါ
fcrackzip ကိုဖွင့်လိုက်ပါ သူ့ရဲ့ usage ကျလာပါလိမ့်မယ်………..ပုံမှာပြထားပါတယ်…………
ကဲ စလိုက်ကြရအောင် သူ့ရဲ့ Useage commend ကတော့ fcrackzip -b -ca-l 1-5 -u /root/Desktop/hello.zip ပါ ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေရှည်ချင်ပါတယ် ဟိုတစ်နေ့က ကျွန်တော်တို့ Group ထဲမှာ မေးထားတဲ့မေးခွန်းကို negative က ပြန်ဖြေထားတာတွေ့ပါတယ် အဲ့ထဲက ဒါက brute force attack ပါ……… အဲ့အကြောင်းကတော့ negative လည်းပြောပြီးသားဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်းထပ်မပြောတော့ဘူး အဲ့အပေါ်က command လေးကို ပေးလိုက်ရအောင်……..ပုံမှာပြထားပါတယ်…………:P
Password Found!!!!!!!!!!! pw= aung တဲ့ မြန်တယ်နော် သူက ၁-၆လုံးကြားဆိုအရမ်းမြန်ပါတယ် နဲနဲPassword ကရှည်လေ နဲနဲကြာလေပါပဲ အခုတော့ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲကြာပါတယ် အများဆုံးပေးတာကလည်း zip password တွေကို ၆လုံးလောက်အထိပဲပေးကြတာများပါတယ် တစ်ချို့ဆိုဒ်တွေက သူ့ဆိုဒ်နာမည်တွေပေးကြာပါတယ် ကဲမှန်မမှန်ဖြည်ကြည့်ရအောင်……………:P
ကဲဖြေလိုက်ပါမယ် ok ပေါ့နော် ရမရအောက်မှာကြည့်ရအောင်……….:P
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမယ် ဒီ့ထက် ကောင်းတဲ့ ပို့စ်တွေ Tool Tutorial တွေရေးပေးချင်သော်လည်း ပုံတစ်ပုံတင်ဖို့တောင် အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေလို့ ကွန်ကောင်းဖို့ပဲဆုတောင်းနေရပါတယ်
မှတ်ချက်။ ။ကော်ပီတွေများနေလို့တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ ကွာလတီပိုစ့်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးလို့ ဆုဆောင်း ဝေမျှထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်.........။
posted by Aung Kyaw Moe
ကိုအောင်ကျော်မိုးနှင့်တကွ တခြားသော ghost area စာတည်းအဖွဲ့ဝင်အား လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်...။
Labels: Backtrack, password, tutorial |